Halyeey Kaniisadaha Oo Biyac In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Halyeey Kaniisadaha Oo Biyac In Europe
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 24/03/2020)
Europe caan dadka kale wax ka mid ah, waayo, Biyac ay naqshadda iyo taariikhi ah taas oo ay muhiimadda taariikhiga ah ee dunida.
Noravank, Gobolka Vayots Dzor (Armenia)
Noravank waa mid ka mid ah kaxeynayo keniisad ugu taariikhiga ah iyo mid taariikhi ah in Vayots Dzor gobolka. Kaniisadda waxa ku wareegsan la dhagaxyada fiiqan cas, iyo muuqaal riwaayado waa mid ka mid ah sababaha ugu fiican ee sahamiyaan Armenia. Noravank taariikhiga la dhisay ah 13th qarnigii iyo hab "New keniisad" in Armenian. keniisad ayaa noqday xarun dhaqan iyo waxbarasho ee Armenia.
Tatev keniisad, Gobolka Syunik (Armenia)
Tatev waa mid ka mid ah alaab naqshadaha Armenian. keniisad waxaa la dhisay qarnigii 9aad-13aad waxay ahayd xarun waxbarasho oo uu leeyahay muhiimad taariikhi ah waayo taariikhda Armenian. Magaca keniisad uu leeyahay asal ahaan xiiso leh. Waxaa jira legend a nice iyo fogaynayso ku saabsan sayidkii kii dhisay guri keniisad. Wuxuu ahaa u xiiseynayey in ay cirka ka soo arko masterpiece oo doonaya in ay baal weyddiiyeen Ilaah in la siiyo baalashooda.
Ilaahna wuu maqlay salaadda iyo isaga siiyey baal suurad wacan. Erayga "Tatev" loo tarjumay sida "Baalal siiyo". Marka aad booqato keniisad aad dareemi doontaa macnaha dhabta ah. keniisad waxaa hareereeyey by hoydaan haadaamaha qoto dheer ka dhinacyada oo dhan. Church Armenian ayaa door muhiim ah ka diin Armenians iyo dhaqanka. nooca Ant of safar gobolka Armenian idin siin doonaa fursad ay ku sahamiyaan dalka ugu da'da weyn.
Sagrada Familia waa kaniisadda ugu soo booqday halyeey ee Spain. Dhismaha taallo si rasmi ah bilaabay 1882. Naqshada Francisco de Paula del Villar loogu talagalay in style a classic Gothic. laakiin, in 1883 Antoni Gaudi bedelay mashruuca iyo in la dhiso naqshadaha casri ah oo waa caanka ah ee dunida. Dhismaha waxaa lagu dhammayn karaa 2026, waayo, centenary dhimashada Antoni Gaudi ee.
Injineerka ayaa la qorsheeyay in la dhiso 12 munaaradaha, heegan u ah Ciise Masiix iyo Xertiisii, mid ka mid ah hooyada Ciise, afar xuska wacdiyayaal. Currently, ayaa dhameystirtay sideed munaaradaha. Inside kaniisadda, Gaudi loogu talagalay tiirarkii qaab a of dogob geed caato ah taas oo ka dhigi style kaynta. Laga soo bilaabo sare ee macbudka, waad arki kartaa views cajiib ah ee magaalada.
Borgund aadannimo, Borgund (Norway)
aadannimo kaniisadda waa dalka durkiya ugu cabsi badan ee Norway. Waxaa la dhisay 1180 oo waxaa ka go'an in ay Andrew Rasuulka. Noocan ah kaniisadaha ay yihiin taxadiri halyeey ugu muhiimsan ee naqshadaha Norway. Qaar ka mid ah sifooyinka ay jilicsan yihiin portals Cunina Xad xardhan iyo iskutallaabaha iyo sawirro madaxdii masduulaagii ee ku saabsan saqafyada. style waxaa la faafin in Scandinavia oo loo isticmaalo in Britain ay aad u.
Meesha waxa ku wareegsan oo dhaxalkii hodanka ah oo taariikhi ah. Vindhellavegen ayaa yaalla meel u dhow kaniisad iyo soo jeedinaya fursadaha socodka qurux badan. Tani wadada taariikhi ah waxaa la guddoonsiiyey "Jidka ugu quruxda badan Norway ee" Maamulka Waddooyinka Dadweynaha ee Norway in 2014.
Duomo ku taalaa dhinaca waqooyi ee Milan, cathedral this ugu weyn waa mid ka mid ah qaababka ugu cabsi badan oo soo jiidasho leh oo adduunka ah. Sayidka iyo Archbishop of Milan doonayaan inay dhisaan Cathedral u gaar ah in ka dhigi lahaa quruunta si ay u dareemaan ammaanta Ilaah iyo xidhiidhka magaalada. Waayo, dhismaha Duomo constructors lug, farsamo, iyo saanacyadii ka badan oo Yurub. waayo-aragnimo Shaqaale kasta iyo dadaalkaas caawiyey in la abuuro International Gothic Duomo.
style Tani waxa lagu gartaa height iyo riwaayado decoration. Qiyaastii dhismeedka jira in ka badan 3400 Sidaana, 135 gargoyles, iyo 700 marmar ah tirooyinka in sifaha Duomo. From peak ugu sareeya, halkaas oo aad ku fuuli karto jaranjarada ama wiishka u qaadaneysaa, waxaad arki doontaa Madonnia u doonteen, taalada matalaad dahab ah Mary iyo maalmaha cad ku raaxaysan karaan views breathtaking ee Milan.
Hallgrimskirkja kaniisadda waa dhismaha ugu sareeya iyo ugu weyn ee Reykjavik oo la arki karo magaalada oo dhan. Kaniisadda ayaa 74,5 mitir sare iyo dalxiisayaasha geli karto kiniisadda oo wuxuu ku raaxaysan aragtida taariikhi. dhismaha ayaa bilaabay in 1945 iyo kuwa la dhameystiray ee 1986. Kaniisadda casri ahayd la mid ah dhagax dab basalt ku qubanayo marka dhagax dab qaboobeyso dhagaxa.
tuubooyinka The fog ka timid afar ay buugagan iyo baydalka ah. Waxaa jira 102 Saf, 72 joogsato, iyo 5275 tuubooyinka iyo waa 15 mitir dhaadheer, culeyskiisu ka badan 25 metrik. dhismaha waa awood iyo awood u buuxinta meel bannaan oo quduuska ah oo aad u weyn. dhismaha hay'adda la dhammeeyey in 1992 ayaa loo isticmaalaa noocyo kala duwan oo cajalado.
aad diyaar u ah inay u arkaan qaar ka mid ah Kaniisadaha caanka Oo Biyac In Europe tahay? Waxaad ka heli kartaa dhammaan meelaha kuwaas oo si fudud iyadoo la kaashanayo Save A tareenka ! Iyada oo aan lahayn lacag dheeri ah oo qarsoon, aad leedahay doonaa dheeraad ah in la geliyo raacid cabsi badan iyo jeer wanaagsan!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ficonic-churches-and-monasteries-in-europe%2F- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#kaniisadaha #Biyac europetravel safarka
Anigu waxaan ahay blogger safarka ah iyo sidoo kale wakiilka safarka. Waxaan jeclahay in aan u safro tacabur iyo ka ogaado adduunka cajiibka ah - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareenka Safarka ee Hungary, Tareen Safar Talyaani, Tareen Travel The Netherlands, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe
Cities Best In Europe Waayo Suuqa By tareenka
Tareenka Safarka Belgium, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland, Tareen Travel The Netherlands, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe